Top 6 emulators SNES - ciyaaro kulan SNES on aaladaha kale ee
Nidaamka madadaalada Nintendo super ahaa 16 yara Console ciyaarta video hore la sii daayay sanadkii 1990 ee Japan, SNES waxay ahayd guul wayn oo noqday Console ka bestselling ee xilligii. Console ayaa la soo bandhigay sawiro sare iyo taageero dhawaaqa, oo lagu daray horumarinta gol leeyahay chips ka dhigtay in tartan rasmi ah ee suuqa. Sega Bilowgii la sii daayey ka hor SNES oo loo ogol yahay in ay helaan Genesis hogaanka olole suuq-geynta. Inkastoo Bilowgii keentay SNES ee iibka ee consoles'ka jiilka 16 yara, laakiin SNES ayaa ugu danbeyn la wareegay sida jiilka dhammeeyey. SNES ayaa waxaa loogu talagalay in ay Masayuki Uemura, oo sidoo kale loogu talagalay Famicom asalka. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee lagu iibiyo loogu Console ahaa xaqiiqada ah in la soo baakadeeyey la Super Mario Adduunka. Asal ahaan, koobab aad u yar oo la geeyey sii daayay, sida Pilotwings, F-Zero, SimCity, iyo Gradius III, laakiin horyaal oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen kuwo aad si fiican u heshay oo soo bandhigay ee SNES ee Mode 7 kartidooda.
Processor: 65c816 (16-bit)
Xawaaraha processor: 2,68 iyo 3.58 Mhz
RAM xusuusta: 1 Mbit (128 Kbyte)
Qaraarka: dhigsan hi 256x224 512 x 448 pixels max iyo hababka oo isdhaafsan
Colors Available: 32.768 midabo
Max midabo shaashadda: 256 midabo
Sprite size Max: 64 x 64 pixels
SABABTA SNES HORUMARINTA EMULATOR:
Maanta waxaan heysanaa badan qalabka Console sare aan ku raaxaysan karaan, dadka qaarkood ayaa weli jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro SNES horumariyo kulan ee nidaamka, si horumarinta la shaqeeyay tan sano oo isku dayaya in ay ku daydaan nidaamyada SNES gal ah qalab cusub oo horumarsan.
Nidaamyada hawlgalka lagu taageeray laguna Aragtida hab OF SNES:
Emulator Tani waxay ahayd mid ka mid ah mashaariicda ugu horeysay si ay u taageeraan kala duwan ee kulan SNES, waxa ugu dhakhsaha badan u noqday mid ka mid ah emulators SNES ugu caansan.
Waxay eegaan dega Khayaadka oo aad u adag oo ah muuqaalada SNES iyo hardware
Its raad xasuus yar yahay hal dhibic oo lagu daray taas oo ka dhigaysa waa barnaamij weyn ugu ciyaartoyda ah.
Audio 44,1 kHz iyo saamaynta badan.
Ogaaaday of video filtarrada
Hab screen Full taageeray
Taageerada kala duwan ee kulan
Emulates muuqaalada adag Console SNES
Taageero audio Great la video filtarrada
Emulates inta badan kulan SNES
Taageerayaan u DOS oo Linux aad
Snes9x waa emulator ah freeware. Waxaa loo sameeyay 1997. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u ciyaaro inta badan SNES kulan nidaamka PC aad. Snes9x waxaa ku suntan in C ++ afka la Tuulo dega Khayaadka oo processor ururiyaha hadda waxaa jira dekadaha badan oo snes9x heli karo. Snes9x ahaa mid ka mid ah emulator ugu horeysay in ay ku daydaan Snes gol leeyahay chips ilaa xad ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaan emulator hore snes in ay bixiyaan wax soo saarka codka
Taageerada la gelin codka
Heer Sare Ah gol leeyahay snes dega Khayaadka oo qori
Shaders Cg taageerada ka mid ahaa
Cross-madal hawlgalka nidaamyada.
Heer sare ah xaasidnimo emulator Fast
Ma u baahan tahay kheyraad aad u badan in ay ka cararaan.
Emulates inta badan kulan SNES.
Qaar ka mid ah kulan ay la kulmi karaan kooxda Leeds.
Emulator BSNES taagan kala duwan oo ka soo emulators kale soo baxay, waa emulator ah in ay diiradda dega Khayaadka oo aad sax. Iyadoo emulators kale dhigay ay dadaal ku kulan oo caan ah, BSNES diiradda in heerarka dega Khayaadka oo ay ku gaari waayo-aragnimo ciyaaraha sida Console dhab ah. BSNES hadda bixisaa ku dhowaad 100 boqolkiiba waafaqsan yahay oo dhan oo ka mid ah kulan super Nintendo in ay ahaayeen ganacsi sii daayay.
Aad dega Khayaadka oo sax ah dadka isticmaala siin waayo-aragnimo ciyaaraha kama dambaysta ah ee ay PC.
Boqolkiiba 100 kulan oo waafaqsan
Dekedaha daaqadaha, Linux iyo OS X
Taageerada wax soo saarka dhawaaqa Great
Emulator Fast oo sax ah
Waafaqsan madal Cross
Gacanta ku Programmable
Waxaa loo baahan khayraad badan emulator caadi SNES.
Higan waa emulator multi-nidaamka hadda ay taageerto NES, SNES, Game Boy, Game, Boy Color iyo Game Boy Advance. Higan ka dhigan tahay Hero of dab, horumarinta Higan la joojiyay.
Xallinta screen Full taageerayaan
Nidaamka emulator Multiple
Taageerada Sound Good
Fikradda ah Game fayl soo bandhigay
Cheats, SRAM, goobaha talooyin ku kaydsan yihiin la kulanka
Game fayl waxtar leh in uu kaydiyo SRAM, Cheats iyo goobaha ay gacanta ku
Shilalka joogta ah
Asal ahaan loogu talagalay wareeg-sax ah xudunta u snes.
Emulator gaabis ah
Emulator SNEese ciyaari karo kulan badan oo ganacsi, waxaa ku qoran C iyo C ++ luqadda laakiin dhibaatadu waxaa weeye in tani ay tahay emulator quruxsan gaabis ah marka loo eego kuwa kale ee suuqa. Waxaa la joojiyey by Savoury laakiin TRAC ayaa weli ka shaqeynaya u versions imtixaanka si beta ayaa la sii daayay, waayo, wakhti dheer ah. Emulator Xaqiiqadii tani waa u PC ee la socda MS-DOS. Waxa aanu u baahan processor degdeg ah si dhigaya fiican ee nidaamka ka weyn.
Taageerada hab 7 saamaynta gargaarka bani-
Taageero dhawaaqa Good
Ciyaari karaa kulamo badan oo ganacsi
Naqshadeynta Debecsanaan iyo gargaarka bani-
Fiican ee computer shuruudaha hooseeyo
Emulator aad u gaabis ah
Miyuu yar cayayaanka
Emulator Tan waxaa loogu talagalay madal daaqadaha, oo waa emulator cusub SNES oo weli la sameeyey maanta, engine ee naqshadeynta waa mid aad u wanaagsan oo waa il emulator furan. Waxaa iney leeyihiin PPU dega Khayaadka oo fiican, waafaqid ee emulator tani ay tahay mid aad u wanaagsan, aad si fudud u heli karaan code isha loogu emulator this website-ka rasmiga SNem ah.
Graphics engine waa hufan
La'aanta user interface
Dhiqlaha oo shilalka waa wax caadi ah
Sida loo isticmaalo Sound Card Emulator si ay u abuuraan kaarka codka dalwaddii
Top 10 HD Games u Android 2015
> Resource > Emulator > Top 6 SNES emulators - ciyaaro kulan SNES on aaladaha kale ee